people Nepal » एमसीसी राजनीतिक अस्त्र, कस्को के स्वार्थ ? एमसीसी राजनीतिक अस्त्र, कस्को के स्वार्थ ? – people Nepal
Posted on January 1, 2022 by Tara Nidhi
काठमाडौं, १७ पौष । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोग हो । यो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार संसदबाट पारित विना कार्यान्वयन हुँदैन । तर, नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु एमसीसीको विषयमा विभाजित छन् । यतिसम्मकी सत्ता गठबन्धनका दल र नेता नै यसबारे विभाजित छन् ।
एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि उभिएका छन् । उनी एमसीसीको विपक्षमा उभिएर प्रचण्डलाई आश्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् । यसबाट सर्वसाधारणमा लोकप्रीय हुन खोज्दैछन् । अर्कोतर्फ, प्रचण्डसँगको पार्टी एकता वा सहकार्यलाई पनि मजबुत बनाउने माहोल निर्माणमा माधव नेपाल देखिएका छन् । एमसीसी अलमलम भएमा गठबन्धन जोगिने र प्रचण्डसँग चुनावी सहकार्य वा एकताबाट फाइदा लिन सक्ने बुझाई उनमा देखिन्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विगतमा एमसीसी पारित गर्न बढेका थिए । तर, उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दोषी देखाएका थिए । यसपटक भने उनी एमसीसीबारे प्रष्ट भएका छैनन् । एमसीसीबारे गठबन्धनको धारणाबाट मात्र निर्णय लिने रणनीतिमा छन् । गठबन्धनले एमसीसी पारित गर्न खोजेमा ओली विरोधमा उत्रने निश्चितप्रायः छ । एमसीसीबारे गठबन्धनमा मतभेद भई संसदमा अगाडि बढाउन खोजे ओली देउवालाई साथ दिने रणनीतिमा छन् । यसबाट सत्ता गठबन्धन टुटाउने र चुनावमा लाभ लिने ओलीको बुझाई देखिन्छ ।